विप्लवको फौजी रणनीतिः नेताको जिम्मेवारी फेरियो, ब्युरो घटाइयो
कृष्ण गिरी काठमाडौं, २७ जेठ
नेत्रविक्रम चन्द(विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पार्टी नेता एवं पदाधिकारीको सांगठनिक जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ । केही दिनअघि बसेको स्थायी समिति बैठकले नेता एवं पदाधिकारीको जिम्मेवारी फेरबदल गरेको हो ।
कस्तो छ नयाँ सांगठनिक संरचना ?
नेकपाको सांगठनिक ढाँचामा स्थायी समिति सबैभन्दा माथिल्लो निकाय हो । जसमा पाँच सदस्य छन् । जसमध्ये रुकुमका हेमन्त प्रकाश ओलीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । उनी अहिले नख्खु जेलमा छन् । बाँकी चार सदस्यले अहिले पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
महासचिव विप्लवले सिंगो पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका छन् । त्यस्तै, उनी सैन्य विभाग प्रमुख पनि हुन् । सैन्य विभागमा ९ सदस्य छन् । त्यहीं विभागले देशभर सैन्य, राजनीतिक र सांगठनिक गतिविधिका लागि निर्देशन दिन्छ ।
प्रवक्ता प्रकाण्ड दोस्रो वरीयताका नेता हुन् । उनी मध्यकमान्डको इन्चार्ज छन् । उनले पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गरिरहेका छन् ।
हेमन्त प्रकाश वली अहिले ललितपुरको नख्खु जेलमा छन् । उनी पक्राउ पर्दा मध्यकमान्डको इन्चार्ज थिए ।
सन्तोष बुढा मगरले पूर्वी कमान्डको नेतृत्व गरिरहेका छन् । यसअघि उनले पश्चिम कमान्डको नेतृत्व गरेका थिए ।
पश्चिम कमान्डको नेतृत्व वीरजंगलाई दिइएको छ । उनी नेकपाको पोलिट ब्युराे सदस्यसमेत हुन् । अरु कमान्डको इन्चार्ज स्थायी समिति सदस्य भए पनि पश्चिम कमान्डको नेतृत्व भने पोलिट ब्युरोलाई दिइएको हो । वीरजंग विप्लवका दाइ हुन् ।
ब्युरोको संरचना र इन्चार्ज
१. कोसी–मेची ब्युरोको इन्चार्ज ‘शिलु’ छन् । उनी राजनीतिक र सैन्य क्षेत्रमा कुशल मानिन्छन् ।
२ सगरमाथा ब्युरोको इन्चार्जमा ‘दिपेश’ छन् । उनी पहिलादेखि नै यही ब्युरोमा रहेर काम गरिरहेका छन् ।
३. जनकपुर ब्युरोको इन्चार्ज ‘सन्देश’ छन् । उनी पहिला पनि सैन्य क्षेत्रमा काम गरेका युवा हुन् ।
४. पूर्वी ताम्सालिङ ब्युरोको इन्चार्जमा ‘आधार’ छन् । उनी सांस्कृतिक फाँटका हुन् ।
५. नारायणी प्लस चितवन ब्युरोको इन्चार्जमा ‘मिलन’ छन् । उनले पहिला पनि सैन्य विभागमा काम गरेका थिए । अध्ययन अनुसन्धानमा रुचि राख्ने उनी रोल्पाका हुन् । यो ब्युरोलाई अहिले दुई ब्युरो मिलाएर बनाइएको छ ।
६. उपत्यका पश्चिम ताम्सालिङ नयाँ ब्युरो हो । यो ब्युरो दुई ब्युरो मिलाएर बनाइएको हाे । पहिला उपत्यका ब्युरो र पश्चिम ताम्सालिङ ब्युरो थियो । यसको इन्चार्जमा प्रज्वलन छन् ।
७. गण्डक ब्युरोको इन्चार्ज ‘आस्था’ हुन् । उनी बेपत्ता पारिएका परिवारकी हुन् ।
८. धौलागिरी ब्युरोको इन्चार्जमा ‘ध्रुव’ छन् । उनी पुराना नेता हुन् ।
९. पुराना दुई ब्युरो मिलाएर बनाएको भेरी कर्णाली ब्युरो बनाइएको छ । पहिला भेरी र कर्णाली अलग–अलग ब्युरो थिए ।
१० राप्ती ब्युरो इन्चार्जमा सुवास पाठक छन् ।
११ सेती महाकाली ब्युरो पनि दुई ब्युरो जोडेर बनाएको छ । पहिला सेती र महाकाली अलग–अलग ब्युरो थिए र यो ब्युरोको नेतृत्व ओम पुनले गरिरहेका छन् ।
काठमाडौंको इन्चार्जमा ‘नवीन’ चयन भएका छन् । सेक्रेटरीमा भृकुटी छन् ।
जनवर्गीय संगठनको बैठक
नेकपाका मध्य कमान्ड इन्चार्ज खड्कबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड)ले पार्टीका सबै जनवर्गीय संगठनको बैठक बोलाएका छन् । यसअघि उनले मध्य कमान्डमै देशभर रहेका जनवर्गीय संगठनका प्रमुख बोलाएर बैठक गरेका थिए । उनले सबै संगठनका नेतालाई ‘संघर्षबाट पछाडि नहट्न’ निर्देशन दिएको बताइएको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ २७, २०७६, ०२:४३:००